Filimka caawo ASTAAN TV saaran Pencil (2016) filim qayaano badan wax badan ka ogaaw – Filimside.net
Filimka caawo ASTAAN TV saaran Pencil (2016) filim qayaano badan wax badan ka ogaaw
February 15, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 15, 2019
Caawo ASTAAN TV (Mogadishu) Kanaalka 5-aad waxaa kasoo galaayo filimka Tamil-ka ah Pencil (2016) ee qayaanada badan waana mashruuc aad loo amaanay fariintiisa, dhankeena filim cusub ayuu ka yahay madaama fasiraadiisa nagu cusub tahay.
Jilaayaasha filimka Pencil: G. V. Prakash Kumar iyo Sri Divya
Xiliga la daawaday: 13 May 2016
Fariinta Filimka Pencil Oo Kooban: Filimkan sheeko ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Koonfur Korea sameeyeen ee lagu magacaabo 4th Period Mystery (2009).Shiva (G. V. Prakash Kumar) waa ardayga ugu wanaagsan Iskuulkiisa balse waxay si gaar ah u xifaaltamaan Nithin (Shariq Khan) oo ah wiil uu dhalay xidig filimada jilo.
Nithin (Shariq Khan) mar walbo wuxuu isku dayaa inuu la dagaalo ama aflagaadeeyo Shiva (G. V. Prakash Kumar) dhamaan ardaydana wey og yihiin inay labadooda caddow isku yihiin si xunna u xifaaltamaan.
Maalin maal maha ka mid ah Nithin (Shariq Khan) wuxuu guubaa buuga Thesis-ka ama buuga qalin jebinta uu diyaariyay Shiva (G. V. Prakash Kumar) kadibna ardayda hortooda ayay ku wada dagalamayaan madaama Siva laga galay qalad aan la qaadan karin kadibna maamulaha iskoorka ayaa soo kala dhex galaayo.
Siva asigoo careesan ayuu fasalka ku laabanaa ujeedkiisana wuxuu yahay inuu la dagaalo Nithin, laakin si la yaab leh wuxuu arkaa Nithin oo la dilay meedkiisana fasalka dhex yaalo oo qoorta laga galiyay qalin afkiisa muduc yahay!
Siva qalinkii dhiiga lahaa ayuu qabsanaa kaliya waxaa arkeyso gabadha ay isku fasalka yihiin sidoo kalena jaceylkiisa ah Maya Srinivasan (Sri Divya) oo diyaar u ah inay garab siiso si uu u cadeeyo inuusan isaga dilin Nithin.
Haddaba 40-daqiiqo kadib fasalka ardayda wey kusoo laaban doonaan weyna arki doonaan meedka Nithin!
Maxaa la gudboon inuu Siva sameeyo siduusa ku caddeyn karaa inuusan wax dambi ah galin u daawo fasiraada ASTAAN Films oo Afkaaga Hooyo kuugu soo turjumeen si aad wax badan kaga ogaatid filimkan xiisaha badan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Pencil (2016) oo xiiso badan:
Film oo dhamaystiran xageee lagu heli YouTube mise lagama heli karo